"Waan Ooyey Markii La Iga Reebay Xulka Qaranka England Ee ..." - Laacib
“Waan Ooyey Markii La Iga Reebay Xulka Qaranka England Ee …”
Jesse Lingard ayaa qirtay inuu ilmada xajisan waayey oo uu ooyey markii uu tababare Gareth Southgate ka reebay liiska ciyaartoyda xulka qaranka England ee tartankii dhowaanta dhamaday ee Euro 2020.
Laacibkan Manchester United ayaa lagu soo daray 33kii ciyaartoy ee liiska hordhaca ah, laakiin waxa laga reebay liuiskii kama dambaysta ahaa ee 26ka ciyaartoy ee ka qayb-galay tartankaas.
Inkasta oo uu qaybtii dambe ee xilli ciyaareedkii hore bandhig fiican kasoo sameeyey West Ham oo uu amaah ugu tegay, sagaal goolna u dhaliyey 16 ciyaarood gudahood, haddana taasi waxay u goyn weyday inuu ka mid noqdo liiska kama dambaysta ah ee dalkiisa ku metalay tartankii qaramada Yurub.
“Bishii June, waxa aan u malaynayay in aan qabtay wax ku filan in aan ka mid noqdo 26ka ciyaartoy ee ka qayb-gelaya Euros. Waan ixtiraamayay go’aanka Gareth, laakiin markii aan telefoonka ka wacay walaalkay si aan ugu sheegay, waan ooyey. Sidoo kale, walaalkay Lou ayaa ooyey.” Ayuu yidhi Jesse Lingard.
Iyadoo aanu qayb ka ahayn xulka ayaa haddan uu Jesse Lingard qaatay door taageerenimo isaga oo baraha bulshada aan marna ka bixin si uu u muujiyo, sida uu u garab taagan yahay xulka dalkiisa.
Kulankii xulka England la ciyaaray Croatia ayaa uu Lingard baraha bulshada soo dhigay sawir uu ku labbisan yahay garanka Declan Rice, isla markaana uu garabka haysto DJ decks isaga oo muujinaya waddaniyad.